abenzi bemveliso yokutya kwezilwanyana zenzala ngepellet,umthengisi wepelletizer okondla ovela eTshayina
Amandla:15kw,isigaba esinye okanye izigaba ezithathu
Umgubo wokutya we-pelletizer ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi-pellet, isetyenziswa ubukhulu becala ukwenza iipellets zokutya kwezilwanyana kubandakanywa nokutya kwezilwanyana okusuka kwizilo zemfuyo (alfalfa, irhasi, umbona, malt, oats, isoya, njl.). Imigangatho yokutya yeepellet yahluka ngokobukhulu kunye noyilo, ikakhulu kubandakanya ifleetizer yokufa yokutya esityeni kunye iringi die feed feed pellet. Ukuveliswa komthamo weepellets kwimitha nganye yepellet kunokuma ukusuka 80 kg ngeyure ukuya 9 Iitoni ngeyure .Ngumatshini wokutya we-pelletizer othengiswayo sesona sixhobo sikhethiweyo somrabi, intlanzi, inkukhu , iihagu, igusha, isityalo esondla iinkomo. umatshini wokuthengisa ukutya uyathengisa ngexabiso lawo lililo ikakhulu kumakhaya ,ifama encinci kunye ephakathi kunye nemizi mveliso elula, kunye nomatshini wokuthengisa izilwanyana wepelletizer uyathengiswa yimodeli ekhethiweyo yokuphucula ukusebenza kwezoqoqosho.
Izinto ezingafunekiyo zale pelletizer zondla ukutya zikwakhona kakhulu njengokutya okuziinkozo,irayisi husk,isidlo sangokuhlwa,isidlo sengca ,Alfalfa, njl.njl,sinika inkxaso yezobuchwephesha,ixabiso eliphantsi,kunye nenkonzo elungileyo,singakwazi ukukunikeza umatshini wokutya wezilwanyana ngepelletizer ngomgangatho wemveliso ukusuka kwi-30kilograms / h ukuya 1500 iikhilogrem / h.kungafani nokuqwalaselwa kwamandla ahlukeneyo,umatshini wethu wokuhambisa unika amandla nenjini yedizili nokuba yimoto yombane.umbane wepelletizer yokutya inokuba sisigaba esinye okanye isigaba esithathu
Kutheni ukhetha Inkukhu yePelletizer yePelletizer yeCHICKEN yakho?
Le pelletizer yokutyisa i-pelletizer kwifama encinci yenkukhu okanye ukusetyenziswa kwasekhaya kwahlukile kwezinye zondla iimayile zeegiza. Ngokuphathelele inkukhu, zigcinelwe ukukhula ngokukhawuleza kunye nempilo. Ukutya kwenkukhu kufuneka kugxininise umxholo wesondlo kunye nezithako. Siphuhlise ipelletizer yekhaya elenzelwa ekhaya kwaye sigxile ekwandiseni ingqibelelo yesondlo kunye nokuqina kunokukhawulezisa inkukhu ukuba ibe ngaphezulu kwesiqhelo. Yintoni egqithisile, inkukhu kwizigaba ezahlukeneyo zokukhula zifuna ubungakanani obuhlukeneyo bokutya kweepellets, ngomatshini, unokwenza i-pellets zokutya ukusuka 2-10 mm, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
Iimpawu ezizodwa zoMbane ophathwayo wePellet Mill
1. Iqhutywa yimoto yombane, ukonga amandla amaninzi .
2. Imayile yokufa ethe tyaba yenziwa ngezinto ezinganyangekiyo ngenxa yoko inobomi obude benkonzo
3. Uxinzelelo oluguqukayo aluphuculi kuphela amandla e-roller, kodwa yandisa ubomi benkonzo.
4. Inkqubo yokuhanjiswa kuyabonakala, ukuze ukwazi ukubeka esweni inkqubo yokuhanjelwa ngokuthe ngqo ngokubukela igumbi lokukhuphela.
5. Umgubo wokutya wombane wefleten pellet unokusebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo kwiipellets ezincinci zokutya kwizilwanyana ezinjengeenkukhu, umvundla, yehagu, njl.
Ipelletizer yePicktry yePondtry Yonwabela ukuthandwa okuphezulu
Kule minyaka yangoku, ukuphuculwa kwe ipelletizer yokutya ephathekayo yenza ubomi bomntu bube kakhulu. Iyafumaneka kubalimi ukuba neyabo Ikhaya elenziwe ngenkukhu zokwenza iipellets zokutya naphi na nangaliphi na ixesha. Inceda amafama ukuba ajike zonke iintlobo zeengqolowa zibe zizitya zepellets. Umntu ngamnye, le pelletizer yokutyisa iidizili ayinakusindisa kuphela kuhlahlo-lwabiwo mali kwisiseko sokubonelela okondlayo, kunye nokukhawulezisa ukukhula kweenkukhu ngokubonakalayo kunye nokubonelela ngesondlo esongezelelweyo semfuno yeenkukhu. Ke amafama aliqela aqala ukukhetha i-pelletizer ye-pelletizer yokuhambisa ukutya ukuze enze i-pellets zawo zokutya.
Umgangatho ophezulu weSondlo sePelletizer Amacandelo aphambili
Xa umatshini wokuondla izilwanyana usebenza, Iqengqelezi kunye nokufa kusofa kuqalisa ukudibanisa izinto ezingafunekiyo kwimingxunya yokufa ukuze zenze iipellets. Ukucinezelwa rhoqo okunzima okunyanzelekileyo kwenza ukuba iiruble kwaye zife ngokukhawuleza. Uninzi lwabathengi luxhalabile malunga nomgangatho wee-rollers kunye nokufa okucofa eziyeyona ndawo ziphambili zomsebenzi wokutya kwezilwanyana pelletizer. I-roller zethu kunye nokufa okucaba kwenziwa yintsimbi ephezulu ye-alloy yokwandisa ubomi bokusebenzisa. Unyango lobushushu ukuflata eflethini kunye nabaqengqelekayo kwenza ukuba umhlaba wabo ungabi lula. Ngaphezu koko, imilo yethu yokuqengqeleka kunye nolwakhiwo yenzelwe ukuthintela ukutyibilika kwento kwaye inike indawo egudileyo ukuze ikhuphe okungcono. Sikwabonelela ngee-roller ze-premium kwaye iflethi iyafa ezinobukhulu obahlukeneyo bemingxunya ekukhetheni kwakho.
Icandelo lobugcisa bePelletry yePelletizer
4 100~ I-150 320 0.78*0.32*0.75 120
Umboniso we pelletizer feed pelletizer